Ncokola (DAMSSO no.2)
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSangSang
⭐️Damso ikwindawo yokuhlala ezolileyo kwaye inengxolo ngenxa yobume besakhiwo somthi.
Emva kwentsimbi yesi-7pm, awukwazi ukusebenzisa izithethi zeBluetooth okanye wenze ingxolo ephezulu, kwaye awunakuba namaqela.
Nceda uqonde ukuba ungacela ukukhupha ngokukhawuleza xa kukho isikhalazo.⭐️
_ IDamso ikwiDamyang Dambit Cultural Complex, ke yindawo onokuhlala kuyo kwaye undwendwele ngokuzolileyo.
_ IDamso isebenza kuphela kumgangatho wesibini. Kukho i-staircase eyahlukileyo ngasemva kwesakhiwo, evumela iindwendwe ukuba ziyisebenzise ngokuzimeleyo.
_ Kukho iindidi ezimbini ezahlukeneyo zamagumbi akhoyo ukuze kuncokolwe.
✔️ Xa usebenzisa igumbi elinye kunye negumbi lokuhlala (elikhethwe kwiintlobo ezimbini zegumbi) (abantu abaqhelekileyo abayi-2, abantu aba-4 abaninzi)
✔️ Xa usebenzisa yonke indawo kumgangatho wesibini kubandakanya amagumbi amabini (abantu abaqhelekileyo abayi-4, abantu abaninzi abayi-6)
⭐️Ukuba inani labantu lidlula umgangatho, li-10,000 liphumelele umntu ngamnye, kwaye nceda wenze intlawulo eyongezelelweyo kwibala.
** Kongezwa ibhedi yomntu om-1.
** Iintsana ezingaphantsi kweenyanga ezingama-36 zihlawuliswa u-X, ibhedi eyongezelelweyo X
▶️ Linye kuphela iqela elinokubhukhwa.
Okokuqala, enkosi ngokundwendwela iDamsoo.
Ngenxa yentsholongwane ye-corona ekhoyo, siyakunceda ngokungena ubuso ngobuso.
- I-Damso inomnyango ohlukeneyo weendwendwe kunye nesitephusi esahlukileyo ukuya kumgangatho we-2. Okokuqala, emva kokupaka kwindawo yokupaka, vula umnyango wocingo uze ungene, uze ungene endleleni phakathi kwesakhiwo kunye nodonga lwangasemva, kwaye kukho indawo yokungena yeendwendwe kuphela.
- Zonke iifestile zifakwe kunye ne-Alpacan, ifestile yenkqubo yesiJamani. Nceda uqonde ukuba yifestile yenkqubo kwaye uvule umnyango emva kokufunda indlela yokuvula / yokuvala ephawulwe kwisibambo somnyango.
(Ukuba uvula okanye uvale ucango ngokunyanzeliswa ungazi ukuba wenze njani, iifestile zefestile zingonakala. Iintlawulo zokulungisa zingahlawuliswa ngenxa yoku.)
- Njengenxalenye ye-amenity yokuncokola, i-loofahs elahlayo, i-dishcloths, i-capsules yekofu, amanzi asebhotileni, kunye nokutya okulula kuyanikezelwa.
- Emva kokuhlamba izitya ezisetyenzisiweyo, nceda uzomise kwi-tableware drying rack.
- Ekubeni i-chateau yindlu yokhuni, isengozini kakhulu emlilweni. Ngoko ke, nceda ungatshayi ngaphakathi okanye ngaphandle. Ngokukodwa, ukuba utshaya ngaphakathi, unokuhlawuliswa.
-Iprojekthi ye-LG Beam inokuqeshwa ukuba ubuza kwangaphambili.
- Ukungagqibeki ngu-3:00 PM ukungena kunye ne-AM 11:00 ukuphuma.
Ukuphuma kade kwemizuzu engama-30 okanye ngaphezulu kuhlawuliswa i-10,000 iwinile ngeyure. Ukuba unayo nayiphi na imeko ekhethekileyo, nceda uqhagamshelane nathi kwangaphambili.
- Kuphela ukutya okulula ngaphandle kwevumba okanye umkhondo kuvunyelwe ngaphakathi.
⭐️⭐️Zonke izinto zangaphakathi zaseDamso zipeyintwe ngepeyinti ekumgangatho ophezulu. Ukuba imikhondo efana ne-oyile esuka kwinyama yokosa okanye intlanzi eqhotsiweyo itshiza eludongeni, ayicinywa lula kwaye ifuna ukupeyintwa kwakhona, ukuze iindwendwe zihlawuliswe ngoku. Ke ngoko, imisebenzi eshiya ivumba okanye umkhondo ithintelwe ngokupheleleyo ngaphakathi. Nceda uqonde oku.
**Idilesi: 86-13 Taewang 1-ri, Subuk-myeon, Damyang-eup, Damyang-gun
** Ukuba unayo nayiphi na eminye imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi apha 010-5122-6277
Ndiyathemba ukuba uyakwenza ulonwabo kunye neenkumbulo ezimnandi kwigumbi lengxoxo🍀
Umbuki zindwendwe ngu- SangSang
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Subuk-myeon, Damyang